Shirkii Golaha Wadatashiga Qaran oo dib u billowday | KEYDMEDIA ONLINE
Shirkii Golaha Wadatashiga Qaran oo dib u billowday
Shirkii Golaha Wadatashiga Qaran ee magaalada Muqdisho ayaa dib u furmay, kaddib dib-u-dhac ku yimid muddo saddex maalin ah!
MUQDISHO, Soomaaliya - Shirkii Golaha Wadatashiga Qaranka ayaa ka furmay maanta magaalada Muqdisho. Shirka oo uu guddoominayo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda xil gaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa dib loo furay kaddib markii uu dib uga dhacay waqtigii lagu ballansanaa inuu furmo shirka.
Dhammaan xubnahii Golaha Wadatashiga Qaran ayaa shirka ku dhan, iyadoo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen oo ku maqan waddanka Turkiga uu kaga qeyb galayo shirka aaladda fogaan aragga, inkastoo markii hore uu qaaday madaxweynaha haddana dib ayuu ka ogolaaday in uu furmo shirka maanta.
Shirka ayaa la tilmaamay in looga hadlayo dar-dar gelinta howlaha doorashooyinka iyo waxyaabihii ka hirgalay heshiiskii 27-kii May ee hannaanka doorashooyinka dalka.
Inkastoo aysan jirin cabashooyin ay qabaan mas'uuliyiinta ka qeyb galaysa shirka, haddana waxaa jira dood ka imaanaysa qaar kamida Golaha midowga musharaxiinta oo aan ku qanacsaneen tallaabadii horay loo qaaday ee lagu soo xulay guddigii doorashooyinka, walow ay soo dhaweeyeen xubno kamida golahaasi.
Muran siyaasadeedka inta badan dhasha xilliga doorashooyinka waxaa la isku dayaa in si hoose loo xalliyo, iyadoo koox waliba ay dano iyada u gaara wax ku diiddan tahay, haddii si hoose loogu sameeyo ballan-qaad waxaa la arkaa in kooxdii ay ka tanaasusho murankii hore, taasina waa mid lagu yaqaan siyaasiyiinta Soomaalida.
Dowladda uu hoggaamiyo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo ayaa doonaysa in ay iska riixdo kooxaha mucaaradka oo markan u muuqda in ay kala jabeen, RW Rooble oo loo ekeysiiyay inuu dhexdhexaad ka yahay siyaasadda, islamarkaana la sheego inuusan ahayn musharax ayaa doonaya in uu ku qanciyo kooxaha mucaaradka in ay isaga ku kalsoonaadaan, iyadoo la xaqiijiyay in dhammaan go'aannada uu gaarayo Rooble uu kala tashado marka hore madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Farmaajo.
Shirka ka furmay Teendhada Afisiyooni ayaa la filayaa sida aan horayba u sheegnay in wax looga badalo qaar kamida qodobadii lagu heshiiyay September 17, 2020. Si rasmi ahna la isugu raacay May 27 2021. Lama oga waxa xigi doona marka uu soo dhammaado shirkan ay yeelanayaan xubnaha Golaha Wadatashiga Qaran ee doorashooyinka Soomaaliya.